Eyoyikisayo ... Umndilili weFanitshala yeHalloween uceba ukuchitha ngaphezulu kwe- $ 100 kulo nyaka! | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021 NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021 Douglas Karr
Ngethuba lokuqala, ukuchitha imali komntu ngamnye kwiHalloween kuya phezulu kwi-100 yeedola. Kulo nyaka, udidi ngalunye lwenkcitho ephezulu- iilekese, imihombiso, isinxibo, kunye namakhadi emibuliso aya kubona ukonyuka okubonakalayo, hayi ngaphezulu kwenani lonyaka ophelileyo, kodwa nangaphezulu kwamanani enkcitho ka-2019.
Ishelf, 021 Inkcitho yeHalloween, ukuthengisa, izibalo, kunye neendlela eziqhubekayo
Izibalo zeHalloween ZIPHAKAMILE!
Kunyaka ophelileyo, ngaphantsi kwesiqingatha sethu babenomdla wokubhiyozela iHalloween kodwa kulo nyaka inkcitho ibuyile, kwaye ukuthengisa ngeHalloween kubuyile! Nanku ukujonga ezimbalwa izibalo zeHalloween:
Umndilili ophakathi kweHalloween uceba ukuchitha i-102.74 yeedola, ixesha lokuqala apho inkcitho idlule kwi-100 leedola.
Iipesenti ezingama-82 zamakhaya aseMelika anabantwana baceba ukubhiyozela iHalloween.
Iipesenti ezingama-96 zababhiyozeli baya kube besasaza iilekese kubaQhathi-okanye-boNyango.
Abathathi-nxaxheba baseHalloween basebenzise imithombo yeendaba zentlalo ukuba bakhuthazwe, basebenzise i-Facebook, i-Instagram, iPinterest, kunye ne-YouTube ukufumana iingubo kunye nezokuhombisa.
Amakhulu ezigidi azakuchithelwa kudidi ngalunye ukusukela ngo-2019, ngaphandle kwezinxibo, ezibuyela kwinani laphambi kobhubhane kwi- $ 3.3 yezigidigidi kwinkcitho iyonke.
Iingcebiso ezi-3 zokuKhuthaza ukuThengisa ngeHalloween
Abantu Ishelf zibandakanya neengcebiso ezintle zokunyusa iinzame zakho zokuthengisa ngeHalloween:
Gxila kulwakhiwo Ulwaziso lwebrand kuyo yonke yakho Iindlela zokuthengisa zeHalloween.
Yila kwaye wabelane ngokwabantu Izikhokelo zeeholide kubaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo.
Khangela kwaye ufumane ezinye Iimpembelelo zeHalloween ukusasaza igama. Ukhuphiswano olunobuhlobo olunomvuzo omncinci wemali okanye i-freebies epholileyo iya kuba yindlela elungileyo yokunyusa ukubonakala kwakho xa usiya kwintengiso encinci yeHalloween.
tags: 2021halloweenIntengiso yeHalloweenintengiso yeHalloweenIvenkile yeHalloweenInkcitho yehalloweenI-ICSCIBhunga lamaZwe ngamaZiko eeNtengisoTwilleyIsikhokelo semvelisoukubekwa kwemvelisoukubuyisela kwakhonaImidiya yokuncokolaishelfuUmxholo oveliswe ngumsebenzisiumdiliyayoutube